Guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare oo xilka loo dhaariyay - BBC News Somali
Guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare oo xilka loo dhaariyay
Baashe Yuusuf Axmed, guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare
Iyada oo ay goobjoog ahaayeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Maxamed Mursal ayaa waxaa la dhaariyay guddoomiyaha magacaabistiisa ay muranka dhalisay ee maxkamadda sare.
Baashe Yuusuf Axmed ayaa lagu dhaariyay kitaabka qur'aanka, waxaana dhaariyay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo ah Shariif Sheekhuuna Maye.
Madaxweyne Farmaajo oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in uu biloowday isbadal xagga garsoorka ah, taasna ay ka dambaysay kadib markii ay ogaadeen in dhibaatada dalka ka jirta ay ugu weyntahay caddaalad daro.
Baashe oo laftiisa goobta ka hadlay ayaa balanqaaday in shacabka Soomaaliyeed ay heli doonaan garsoor wanaagsan.
Dadka naqdiya tallaabooyinka dowladda ayaa farta ku fiiqay qodob dastuuri ah , kaas oo qeexaya in guddoomiyaha maxkamadda sare ay tahay in uu soo magacaabo guddiga Adeegga Garsoorka, madaxweynaha aysan ahayn in uu farogaliyo laanta Garsoorka oo ah mid ka madaxbanaan fulinta.
Guddoomiyaha baarlamaanka oo akhrinaya dastuurka
Balse maadaamaa uusan jirin guddigaas, waxaa la cuskaday qodob kale oo dastuuri ah oo sheegaya in aanan la ogoleyn in xil iyo xafiis dowladeed aysan banaanaan karin.
Horey guddoomiyihii maxkamadda sare Ibraahim Iidle Suleymaan ee xilka laga qaaday ayaa sheegay in uusan ka tagi doonin xafiiska.
Mudane Ibraahim waxaa horey u magacaabay madaxweynihii hore Xassan Sheekh Maxamuud, wuxuuna ka mid noqonayaa dad badan oo madaxweynayaal hore magacaabeen oo xilkoodii waayay.
Dad badan ayaa ku dhaliilay guddoomiyaha cusub in uusan lahayn qibrad shaqo oo ku filan oo uu ku noqon karo guddoomiyaha maxkamadda sare.
Dhaarta waxa ay ka dhacday madaxtooyada Soomaaliya
TOOS Xiisad ka taagan xadka Itoobiya iyo Kenya
Jabka Trump qofkii u soo joogay
Waa kuma ninka biladda nabadda ku guulaystay ee haddana Shacabka qaxinaya?